Gawracii Soomaliland 10/07/09 « CEELBARDAALENEWS.COM
« Jawaab ku socota ururka Ingineerada Awdal & Salal baaqoodii
Baaruuda Qiiqdiyo hadaan BM lagu raadin GOBANIMO banaan lama helo bar iskataal taale »
Gawracii Soomaliland 10/07/09
Ebidkay ninkii nagu kama’a, kibirna noo keeno, kabo dhiiga waa siin jirnay iyo kalax dhunkaaleed e
Jidgooyadii ka dhacday tobankii july dariiqa u dhaxeeya Dilla iyo Gabiley waa dhacdo waxashnimo ah oo ka baxsan fal aadami sameeyo: Afar qof oo biri ma gayd, oo ah iyaa la gasaaray, 7 kale iyaa la qafaashay, hanta iyo shan baabuur oy saarnayd iyaa la qaatay.
Bisha july 11 keedii iyaa budhcada laga soo qaaday maydkii ay googeeyeen, waxaana ka soo qaaday Wasiirka Gudaha iyo taliyaha ciidanka Soomaliland. Halkaa waxaa aragtaan in budhcada argagixasada ah ee gacan ku dhiiglayaasha ah ay kulmeen madaxdii ugu saraysay ee amniga Soomaliland masuul ka ahayd iyagoo watayt ciidan dhan 300 oo askari iyo qalabkoogii, waxaa cad in argagixisadii fulisay dhagarda waxashnimada leh ay isku hayb yihiin labada masuul ee ka socday dawlada ku sheega Soomaliland. Waliba Jananka ciidanku waxay ilma adeer yihiin dhagar-qabaha ka soo maleegay falka dhagarta ah. Labadaa masuul ku sheeg waxay maydkii afarta shahiid ku wareejiyeen Suldaanka Habar-Cafaan ee Gadabuursi oo hor kacaayay dad badan oo reer Boorama ah, dabadeena wasiirku Hargaysa iyuu iskaga noqday.Jaanankuna wuxuu ciidan hor dhigay dadka Gadabuursi ee daafaca uugu jira si ay iskaga caabiyaan weerarka maleeshiyada dhagarta gaysatay ee wada dhulbalaadhsiga dhabarka ku haya qorshe gundheer.
Wuxuu waliba Jananka ciidamada Soomaliland ciidan dul geeyay magaalada Boorame si dadka cabsi loo gasho isagoo ilaa maanta wax ciidan ah dul gayn maleeshiyada uu ina-adeerkii ka madaxa yahay. Ciidankaas oo khatar wali u arag dhibta dhacday baaxadeeda balse khatar u arkay mudaaharaadkii ay qaadeen dadkii geeriyaysnaa ee Boorama, iyaa ku toogtay Borame Wiil yar oon wax dhib ah wadin balse haystay calankii Soomalia, toogashadaas oo u ka dambeeyay askari ay isku hayb yihiin dhagarqabayaasha wax gawracay . Wiilkaa oo shan iyo toban jir ah lana yidhaa CabdiFataax Cali Qamaan, wuxuu noqday mid ku dhintay fal cusurinimo ah oo ka soo fulay Hargaysa.
Hadaba waxa is waydiin leh laba shay oo ah doorka dawlada Soomaliland iyo Taliyaha Ciidankeeda marka la hadlayo dad-qaladata jidgooyada samaysay.
A- Doorka Maamulka Soomaliland
Marka la darso waxishnimada Hargaysa u waajahday dhacdadan waxaa hubaal ah in maamulka Soomaliland dadwaynaha fursad u siiyay inay su’aalo badan is waydiiyaan isla markaana wuxuu si qayra caadi ah fursad u siiyay muwaadiniita soomaaliyeed ee goonigoosadka diidan gaar’ahaan kuwa reer Awdal inay hoosta ka xariiqaan falalka waaqiciga ah ee tayada u yeelaaya sobobaha ay ugu qanacsanyihiin midnimada soomaliyeed.
Markaan eegno talaabooyinka ay qaaday dawlada soomaliland amba qaabka ay wax u waajahday waxaa soo ifbaxday wajigii qarsoonaa balse runta ahaa ee Mashruuca soomaliland hagoognaa.
Waxyaalaha la yaabkale waxa ugu weyn ninka Madaxweynaha ka ah maamulka Hargaysa oo garan waayay wax dadnimadu farayso marka dhinac layska dhigo dawladnimada ay sheeganayaan. Isaga iyo dawlada u sheeganaayo xubnaha ka tirsan oo boqolkiiba 85% ka kooban haybta ay ka soo jeedaan dhagarqabayaasha gawraca gaystay waxay ka gaabsadeen inay tacsi muslinimo u diraan ehelada masiibadu ku habsatay. Waxay ka gaabsadeen inay cambaareeyaan falka isugu jira argaxganimo iyo waxashnimo. Golayaasha labada ah iyaguna sidoo kale iyay aamus tuhun badan leh hagoogteen.
Dhaqanka sidaas ah wuxuu ka turjumayaa in maamulka Hargaysa ka taliyaa noqday mid gabay amba khaayimay kalsoonidii dadka qaar ay siiyeen,wuxuu noqday mid aamuskiisu taageero toos ah siiyay gacmo ku dhiiglayaashii.
Waxaa cadatay in Ciidamada Soomaliland noqdeen mid hayb ah oon wiilka Rayaale amar ka qaadan. Waxaa cadaatay in Rayaale yahay maqaar saar danaysta ah oo bilaa damiir ah sida ay la wadaagaan kuwa siyaasiin isku sheega ee Awdal iyo Salal ka soo jeeda. Waxaa markhati ma doon ah in Maamuka soomaliland dhagarta waxashnimada leh ee 10 kii july ( 10/7) lagula kacay dad rayd ah oo aqoonyahay ah oo si’ cadawad iyo utin xambaarsan loo gawracay, hantidoodiina loo dhacay. Waxaa iyadna mudan in hoosta laga xariiqo falal aan wali soo shaac bixin oo dhagarqabayaashu u gaysteen laba gabdhood oo safar ahaa iyagoo wax aadanimada ka baxsan falay. Dawlad ku sheegu Hargaysa waxaa qoorta ugu duuban falalkaa aan soo sheegnay anagoo ka warqabna inaan wali wax ficil ah dawladu ka qaadi dhagartaqabayaasha gowraca iyo budh-cadnimada gaystay.
Waxaa xaqiiqa ah in wax dawladnimo ah amba maamul ah inuuna ka jirin Waqooyiga haddayna ahay Maamul argagixiso ah oo u badheedhay inuu dadweynaha in ka mid ah hayb ahaan lagu xasuuqo, tiiyoo lagu xadgudbayo xaquuqaha aas-aasiga ah ee dadka Gadabuursiga.
Habka Maamulka Soomaliland u wajahday Gowricii 7/10 waa hab daaha ka qaadaya in xubno sarsare oo maamulka ku jiraa wax ka soo maleegeen amba wax ka ogaayeen.
Su’aalahan soo socda iyaa wax ka ifinaaya:
Muxuu gabilay ka qabanaayay Wasiirka guduhu labadii habeen ee ka horeeyay Gowraca iyo jidgooyada?
Maxaa aamusiiyay wasirkii indhahiisa ku soo arkay kuwii falka gaystay?
Muxuu ciidanku iyo boolisku iskugu taxalijeen inay Boorame xoog dul keenaan?
Maxaa keenay in ciidanku iyo boolisku ugaadhsadaan dad calanka Somalia sitay halka ay ka gaabsadeen inay dhagarqabayaashii ay soo arkeen soo qabtaan?
Maxaa wafti amba madax maamulka ka socdaa ilaa imika ay u tagi waayeen Boorame?
B- Doorka taliyaha ciidanka soomaliland
Waxaa cad in taliyaha ciidanka Soomaliland iyo dawladiisuba inay si tyoos ah u garanayaan shaqsiyaadka falka waxashnimada leh soo abaabulay iyo kuwa fuliyay qaarkood. Dibjirka xaqdarada iyo xaaraanta ku koray ina Raage dhalay iyo Taliyahana ciidanka oo Taani ah soo laba nin oo ilma adeer ah maaha?
Ka dib sida ay sheegeen dadkii ka fakaday iyo intii la qafaashay ee la soo daayey, waxaa la cadeeyay in Jananka ciidanku iyo ciidamadiisu ay is arkeen. Waxaa la cadeeyay ciidanka iyo argagixisadu inay aag wada joogaan, sida ay sheegeen qaar ka mid dadkii ka fakaday dad qalatada. Sida la wada ogyahay janaku wuxuu ka soo jeedaa reerka dad qalatada ku sifoobay, Sharci iyo wax dawlad u eegna hadday jiraan, jananka iyaa hawshiisa laga fadhiisin lahaa inta uu kiisku sacdo in kastoon dawlad ku sheega si rasmi ah looga maqal inay kiis furtay.
Dadka falka gaystay iyo inta dawlada iyo mucaaridba leh waa isku qabiil. Waxaa lala yaabo ah odayada Sacad-Muuse iyo Siiranyo ilaa ina Biixi oo qiil u helay falka waxashnimada lahaa iyagoo afka ku adkeeyay in falka ay sobobtay go’aankii guurtiga oo la fulin waayay. Waxaa la yaableh, go’aan dad wax dhexdhexaadinaayay marka hore siduu u noqday sharci fulin u baahan. Waxa kale oo cay ah in xasarada Ceelbardaale iyo gawraca waxashnimada ah laysku xidho sida Sacad-muuse iyo madaxda kulmiye isla heleen.
Arimadaasi oo idil waxay muujinayaan shirqool jiray oo gawricii 7/10 hordhac u ahaa.
Isku soo wada duuboo, dhagarta Gadabuursi laga galay waa mid xasuuq ka soo maanguuray qorshe baladhan oo shirqool guud ah oo ay soo maleegeen maleeshiyada dhul-balaadhsiga wada iyo xubne sarsare oo maamulka Hargaysa ka tirsan. Waxaa cad in dhacdadan argagaxnimo sal qabiil leedahay oo dawlad iyo mucaaridba isku mawquf ka dhigtay.
Sidaa darted waxaa haboon in dadka shirqoolka loogu talo galay inay si qoto dheer u waajahaan maadaamow nabadii dadka lagu sasabaayay bohol lagu riday. Awdal eedi way ka hadhay, talana iyaday jirtaa sidii hore ay u sheegeen madaxdii afarta beelood ee shuhaadadu ka soo jeeday. Shicib weynaha Awdal iyo Salalna waxaa ka go’aan inay go’aanka Afarta beelood ku garab taaganyihiin. Gawricii raggu waa inuu keenaa gawrac dhamaystira riyadii la maqac baxday Soomaliland…
Jaamac Cusmaan G
This entry was posted on July 24, 2009 at 10:04 pm	and is filed under 1. Tagged: 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.